Slackware များအတွက် KDM + KSplash ကိုက်ညီ | Linux မှ
Slackware များအတွက် KDM + KSplash ကိုက်ညီမှုရှိသည်
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ
အသုံးပြုသူများ၏နှစ်သက်မှုကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် Slackware ကိုတီထွင်+KDE သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်တာပေါ့ read
စစ်ဆေးနေသည် KDE- ကြည့်ပါ ငါဂိမ်းတစ်ခုရှာပါ KDM+KSplash ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းသောအရာဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္badာန်မှာမဆိုးပါ😀
သင်မြင်သည်အတိုင်း ... ၎င်းသည် KDE 4.2 မှဖြစ်သော်လည်း၎င်းမှာလုံးဝမကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ် download link များထားခဲ့သည်
KDM အတွက်အခင်းအကျင်းကို download လုပ်ပါ
KSplash ကို Download လုပ်ပါ
သူတို့ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလား။ … အကယ်၍ မင်းက Slackware ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်မင်းကကလေးကစားတာ LOL !!! 😉
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဒီ distro ကိုမသုံးဘူးဆိုရင် ... ဒါကိုသင်အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Slackware များအတွက် KDM + KSplash ကိုက်ညီမှုရှိသည်
kde 4.8 xD ကိုဖတ်ရန် image ကိုပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသင့်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ အဓိကအကြောင်းအရာဖိုင်ကိုဇစ်ဇ်လုပ်သည်၊ png, jpeg စသည်တို့ကိုရှာဖွေပြီးစားသုံးသူနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပြုပြင်ထားသည်။ ထိုအခါအရာခပ်သိမ်းကိုပြန်လည်ထုပ်ပိုးပြီးပုံမှန်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောအကြောင်းအရာများကိုထိရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အတိုင်းအတာအတိုင်းပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်နီးပါးကြာသည်။
ငါကြိုက်နှစ်သက်သော KDM သို့ Slim အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသည်၊ သို့သော်၎င်းကို Slim hehe အတွက်ပြုလုပ်သည်။
ianpock ရဲ့ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါသည်လည်းဒါကိုပြုပြင်ခြင်းသည်ကလေးကစားခြင်းဖြစ်မည်ဟုစိတ်ကူးမိသည်၊ သင်သည် slackware ရှိခြင်းနှင့် petarte မပါဘဲနောက်ဆုံးထားခြင်းဖြစ်ရန်လိုသည်။
သို့သော်လည်းငါသည်မှော်မှီခိုနှင့်၎င်းတို့၏ tarball ရဲ့၌တည်ရှိ၏ထင်ပါတယ်
အဲဒါကိုမချိုးဘဲကြာရှည်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ဘူး။ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့သင်၏ system ပေါ်တွင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီသင်ပြုပြင်မွမ်းမံမည့်အရာကို virtual machine တစ်ခုတွင် back up လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
မှီခိုမှုများအကြောင်း ... သူတို့ကိုလက်ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းသည်အလုပ်သမားဖြစ်သည်၊ သို့သော်စာမျက်နှာများကိုကူညီ။ ၎င်းတို့ကိုတရား ၀ င်မဖြေရှင်းနိုင်သောစီမံကိန်းများရှိသည်။
သင့်လျော်သော virtual machine များသင့်လျော်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္likeာန်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်မည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပင်ငါပြောနိုင်သည် gnu / linux ။
Gentoo သည်ခက်ခဲသော်လည်းအနည်းဆုံး portage၊ slackware များလည်း apt နှင့်ဆင်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၀၀% ပျင်းရိသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက် slack က tarballs ဖြင့်သုံးခြင်း၊ မှီခိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစားခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုလက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည် ပိုလွယ်လိုက်တာ…
Gentoo အကြောင်းပြချက်တိုင်း။ apt နှင့်တူသောကိရိယာများရှိသော်လည်း SlackBuilds.org ဟုခေါ်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခုသည်ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးအတွက် installation scripts များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှီခိုမှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း readme's တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါစီမံကိန်းအတွက် scripts ၏စုံတွဲတစ်တွဲပွုပါပွီနှင့်ယခုငါ emesene များအတွက်အခြားတ ဦး တည်းလုပ်နေတာ။ ဒါကကျွန်တော် xDDDDD လုပ်တာပါ
သင်ဟာ Scratch မှ hehehe မှ Linux ကိုမေ့သွားတယ်
နှင့်လွန်းနှင့် Minix ????
သူတို့မှာ distro ရင့်ကျက်မှုကိုဖမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်အမှိုက်မခံနိုင်သကဲ့သို့သင့်တွင်စာရွက်စာတမ်းများလည်းရှိသည်။
scratch ကနေ Linux ကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ pimp ဆိုတာဘယ်သူလဲ၊ သူကငါအချိန်နဲ့ဗဟုသုတမရှိဘူးဆိုရင်သူ pacman မန်နေဂျာ Saka ကိုသွားလိမ့်မယ်။
ငါ့အတွက်တော့သူကတခြားသူတွေကိုလျှော့မတွက်ဘဲအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာ၊ အမြန်ဆုံးနှင့်မှီခိုနေရတဲ့ပြproblemsနာတွေမရှိဘူး။ (ငါသူတို့ထဲကတစ်ယောက်မှမကြည့်ဘူး !!!) Lol !!!
Slackware သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ သို့သော် stallman မုတ်ဆိတ်မရှိသည့်အချိန်မှစာမူများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခြင်းသည်အလွန်လေးလံပုံရသည်။ သို့သော်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကိုလေးစားသည်။
Gaara သည်မည်သည့်အချိန်တွင်နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုအနည်းအကျဉ်းသာရှိသည့်သင်ခန်းစာလျှော့ချမည်ကို to ကြည့်ရှုရန်
KDE အတွက် Kotonaru ဆောင်ပုဒ်
xrandr ကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင် resolution ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ